28 / 07 / 2021 28 / 07 / 2021 ခရစ် Wharfe 736 Views စာ0မှတ်ချက် 71026, DC စူပါသူရဲကောင်းများ, 71026 DC စူပါသူရဲကောင်းများစုဆောင်းထားသောအသေးစား, 71031 Marvel စတူဒီယို, Captain America, ဗိုလ်ကြီးဂarter, စုဆောင်းထားသောအသေးစား, Dc, Disney+, Thanos ၏ Blade ကိုအတူ Gamora, Lego, Lego စုဆောင်းထားသောအသေးစား, Lego DC က, Lego Marvel, Lego စတိုးဆိုင်များ, LEGO.com, Loki, Marvel, Marvel ရုပ်ရှင်ရုံiverseာ, မော်နီကာရက်ဘို, Sylvie, အဆိုပါစွန်ငှက်နှင့်ဆောင်းရာသီ Soldier, Scarlet စုန်းမ, အဆိုပါမျှော်မှန်းချက်, အဆိုပါဆောင်းရာသီ Soldier, T'Challa စတား - Lord, WandaVision, တကယ်လို့ ... ဘာဖြစ်မလဲ...?, ဖုတ်ကောင်ဗိုလ်ကြီးအမေရိကတိုက်, ဖုတ်ကောင် Hunter Spidey
အဆိုပါ Lego Group မှအသစ်ထုတ်ဖော်ပြသသည့်ပုံများကိုထပ်မံထုတ်ဝေခဲ့သည် 71031 Marvel စတူဒီယို စုဆောင်းထားသောအသေးစားဒါဇင်ဒါဇင်ကိုပိုကောင်းအောင်ကြည့်တာပေါ့ Disney+ ဇာတ်ကောင်။
ကောင်းပြီ၊ သူတို့ထဲကအများစုဟာဘာပဲဖြစ်ဖြစ်အနီးကပ်ရိုက်ကူးထားတဲ့ရုပ်ပုံများဖြစ်တဲ့ WandaVision, The Falcon နှင့် Winter Soldier အပါအ ၀ င်သက်ဆိုင်ရာပွဲလေးခုအနက်တစ်ခုချင်းစီမှအသေးစားဓာတ်ပုံ ၂ ပုံပါ ၀ င်သည်။ နှင့် Loki ။
၎င်းတွင် Scarlet စုန်းမ၊ Vision၊ Captain America၊ The Winter Soldier၊ T'Challa Star-Lord၊ Captain C တို့ပါဝင်သည်arter, Loki နှင့် Sylvie ။ အခြားလေး ဦး ဖြစ်သော Monica Rambeau၊ Zombie Captain America၊ Zombie Hunter Spidey နှင့် Gamora (Thanos of Blade of the gamora) (ထင်ရှားသောအမည်၊ eh?) - အုပ်စုဖွဲ့ထားသောရုပ်ပုံများတွင်တွေ့နိုင်သည်။ တနင်္လာနေ့နှင့်အုပ်စုအသစ်တစ်ခုကိုအောက်တွင်ရိုက်ကူးသည်။
71031 Marvel စတူဒီယို ပထမဦးဆုံးဖြစ်ပါတယ် စုဆောင်းထားသောအသေးစား စီးရီးအပေါ်အခြေခံပြီး Marvel Cinematic Universe နှင့်စူပါဟီးရိုးဂိမ်း (၂၀၂၀ ပြည့်လွန်နှစ်များ၏ ၇၁၀၂၆ အပြီးတွင်) မှုတ်သွင်းထားသောလိုင်စင်ရမျက်မမြင်စာလုံးများသာဒုတိယမြောက်သွင်ပြင်သာရှိသည်။ DC စူပါသူရဲကောင်းများ) ။
စက်တင်ဘာ ၁ ရက်မှ စတင်၍ စီးရီးတွင်အသေးစားဓာတ်ပုံ ၁၂ ခုလုံးကိုသင်ရောင်းနိုင်ပါလိမ့်မည် LEGO.comအတွက် Lego စတိုးဆိုင်များနှင့်တတိယ -p ကိုဖြတ်ပြီးart£ 3.49 / $ 4.99 / € 3.99 အတွက် y ကလက်လီအရောင်းဆိုင်များ။ လာမည့်လတွင်ကျွန်ုပ်တို့၏သုံးသပ်ချက်ကိုကြည့်ပါ။
← LEGO ကိုသုံးဖို့စဉ်းစားထားတယ် classic Harry Potter နှစ် ၂၀ ပြည့်အထိမ်းအမှတ်အဖြစ်ပြုလုပ်မည့် minifigures များ
LEGO VIDIYO ၏ဒုတိယလှိုင်းသည်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၌လုံးဝမဖွင့်နိုင်ပါ →